Sweden waa waddan kheeyral caadi ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sweden waa waddan kheeyral caadi ah
Dal ka duwan waddammada caalamka
La daabacay onsdag 28 januari 2015 kl 12.04
Dalka Iswiidhen ayaa lagu sifeeyay inuu yahay waddan aan caadi ahayn oo hab-fikirkiisu ka duwan yahay waddammada caalamka, sida ku cad baaritaan qiimeyn ah lagu sameeyey waddammada caalamka.
Bulshada Iswiidhen ayaa aamin-san ammaan, sinnaan bulshada dhexdeeda ee ragga iyo haweenka, iyo in bulshada badankeed wanaag u aragto soo-galootiga dalkan yimaada iyada oo xitaa ey beryahan Yurub ka aloosan tahay diidmada loo qabo qaxootiga, sida uu sheegtay agaasimaha guud ee ururka World Values Survey, Bi Puranen:
- Midda la-yaabka ku noqotay qaar badan ayaa ah in dalkani ka duwan yahay. D alkani maaha sidii loo haystay iyo inuu la mid yahay waddammada caalamka - lagom waxa afkan lagu yiraahdo. Si wayn ayaan uga duwannhey, tusaale ahaan marka laga hadleyo siyaasadda soo-galootiga. Xitaa haddii ay dalkan ka jirto dood aad u ballaaran ee la xiriirta qaxootiga dalkan yimaada iminka ayaa dhanka kale kolka bulshada codkooda wax laga weeydiiyo oo loo barbar-dhigo waddammada kale ey aad ugu yar yihiin buslhada iswiidhishka ee ka soo hor-jeedda tirada soo-galootiga ee dalkan qaxa ku yimaada.
Daraasaddan ayaa laga amba-qaadey fikirka bulshada caalamka ku dhaqan, halkaasina oo su'aalo kala duwan oo dhowr ah lagu weydiiyey. Dalka Iswiidhen ayaa ka duwan waddammada kale dhammaantood middaasina lagu sifeeyey in dalkani yahay waddan il-bax-nimmadiisu sarreeyso, isla-markaana laga aamin-san yahay xorriyadda shakhsiga iyo siduu fikirradiisa u hir-gelin lahaa. Dalka Marooko ayaa lid ku ah Iswiidhen, iyadoona loo arko in dalkaasi yahay mid diinta ku adag, isla-markaana ay bulshada ku dhaqni ka hormariso sidii uu shakhsigu nolol maalmeedkiisa ula soo bixi lahaa, kolka loo barbar-dhigo xoriyadda shakhsiga.
Marka laga yimaado fikirka wanaag-san ee bulshada dalkani ka qabto soo-galootiga ayuu dhanka kale yahay waddan ku caan baxay nidaamka sinnaanta ragga iyo haweenka, hase yeeshee dhanka kale uu dalkani ku liito ixtiraamka waayeelka, sida waddammo badan oo caalmaka ka mid ah ey u qadariyaan waayeelkooda. Waxaannu dareen-sannahey ammaan, isla-markaana aannu aamin-sannahey habka nidaamka bulshada:
- Waddammo badan ee caalamka ku yaala ayaan ammaan nolosha ku dareemin, sida matalan cabsida laga qabo falalka argagixis-nimo, dagaal sokeeye ee ka dillaaca, sida matalan waddamada dhaca Bariga Dhexe. Hase yeeshee ay bulshooyinkaa qudhoodu ku dareemaan ammaan qoyska ama qaraabada dhexdooda.
Sababta uu dalkani uga duwan yahay badankood fikirrada bulshooyinka waddammada kale ayaa loo sababeeyn karaa siyaabo kala duwan. Bi Puranen ayaa sheegtay in hab-fikireedka nolosha qowmiyadda iswwiidhishku ku xiran tahay nidaamka hab-wanaagga nolosha ee dalkan ka jira, ase yeeshee ey jiraan waxyaabo laga sii hagaajin karo sida ey iminka yihiin Iswiidhen qudheeda:
- Waxaa ugu wacan inaan dhisney nidaan hab-wanaag suurta-gelinaya in tusaale ahaan la shaqeeyo, isla-markaana reer la dhaqan karo, midaasina oo hagaajinaysa xaaladda hawenka dalka, marka loo barbar-dhigo waayadii hore. Waxaa kaloo ka mid ah inaannu leenahey hayado dhowra xuquuqda shacabkeeda iyo in ciddii doonta ey go'aan ku gaari karto iney nolosheeda iyada/isaga gacanta ugu jirto. Guud ahaan waxaa la oran karaa in dalkani yahay mid xorriyad ay ka jirto, halka dhanka kale ey jiraan howlo badan oo u baahan wax ka qabasho.